LLC "Agrofirma KRiMM" - Magazini "Potato System"
Gwaro remutemo mutsva wekutonga ivhu riri kugadzirwa kubazi rezvekurima
LLC "Agrofirma KRiMM" ndeimwe yevanogadzira hukuru hwechikafu nembeu mbatatisi uye yakavhurika miriwo muRussia. Muna 2020, goho rakakura rekugadzirwa kwezvirimwa rakasvika pamatani 162. Uye zvakare, iyo purazi iri kuita kurima zviyo, kubatwa chibharo uye masaradhi. Iyo yakazara nzvimbo yakadyarwa inopfuura 822 zviuru mahekita. Bhizimusi iri rinosanganisira robhoti yakaoma yekuzadza uye kupakira michina, tambo yekuwacha / kupukuta zvigadzirwa zvemuriwo, imba hombe yemiriwo muRussia nemakamuri efriji uye rabhoritari yakasarudzika yembeu yekutanga inokura mbatatisi "SoKar" (varietal mbatatisi), inozivikanwa Russian Agricultural Center, iyo inopa bhizinesi nembeu dzakasarudzika: kubva pakuwana minitubers kubva kune ekuyedza-chubhu michero kune zvigadzirwa zvakapedzwa.
Ndosaka femu yekurima "KRiMM" ichivimba nekusimudzirwa kwesarudzo uye kugadzirwa kwembeu nhanho yeEuropean, inokwanisa kukwikwidza kwete chete mudzimba asiwo mumisika yekunze.
Chimwe chinhu chakakosha chigadzirwa chembatatisi. Iri rakasarudzika chirongwa harina zvakafanana munharaunda yeRussian Federation. Iko kugadzirisa kwegore negore kugona kuri 15 matani ezvigadzirwa zvakapedzwa, zvese zvezvigadzirwa zvekugadzira uye nezvezvitoro uye HoReCa neB000B zvikamu. Muti wacho unoshongedzwa nemhando yepamusoro-yekuita iyo inogadzira zvigadzirwa zvembatatisi senge mbatatisi dzakapetwa pamwe neasipo zvinowedzerwa nehusherufu hwemazuva anosvika makumi matanhatu pasi pechiratidzo cheHalf-Cooked, uye Fresh Cut - mbatatisi nyoro dzakasvuurwa nehusherufu hupenyu hwe kusvika mazuva mapfumbamwe. Nekugadzira kwavo, zvinonyanya kusarudzwa mhando dzembatatisi nekuravira kwakanaka zvinoshandiswa.
Agrofirma KRiMM LLC yanga ichifamba ichienda padanho rakaringana idzva rekusimudzira kugadzirwa zvakarongeka kwemakore makumi maviri. Yakavambwa mu20 pahwaro hwepurazi revarimi "Niva", nhasi bhizinesi iyi ndeimwe yemakambani makuru ekurima ekurima mbatatisi nemiriwo kwete mudunhu reTyumen chete, asiwo muRussia. Pakutanga, iro rezvekurima bhizinesi raive rakavakirwa pamisimboti yehunyanzvi uye kusimbisa, kuitiswa kwezviwanikwa zvesainzi uye tekinoroji kufambira mberi, kukwikwidza kwehupfumi uye zviratidzo zvehunhu zvezvinhu zvakagadzirwa.
Nhasi uno kambani yekurima inoshandisa akanakisa masarudzo, inoshandisa matekinoroji epamberi epamusoro embeu nemiriwo, mhando dzazvino dzemuchina nemidziyo. Semuenzaniso, murabhoritari yeSoKar pamatanho ese ekupararira kwembeu mbatatisi, kutonga kwehunhu kunoitwa uchishandisa ongororo yePCR (polymerase cheni reaction), pamwe neELISA (enzyme-inosanganisirwa immune immunosorbent assay). Rabhoritari inogadzira zviuru gumi nemazana mana nemazana matatu ezviyedzo-bhuti zvirimwa pagore kuwana 1 minitubers. Nekuda kweizvozvo, muunganidzwa wepurazi matapiri unosanganisira 000 marudzi - Rosara, Zekura, Karatop, Gala, Innovator, Lux, Bravo, Red Scarlett, nezvimwe.
Nzvimbo iri pasi pembeu mbatatari inopfuura 950 ha, gohwo repakati nepakati riri 27 t / ha.
Chinhu chinonyanya kukosha mumatekinoroji ekugadzira zvigadzirwa zvezvirimwa mufemu yekurima "KRiMM" idanho-nhanho kusimudzira kweiyo chaiyo yekurima system.
Ipurazi iri pane mahekita 2500 XNUMX evhu rakadiridzwa. Nyanzvi dzinogara dzichiona hunyoro hwevhu uye vanosvika pakufunga kuti kudiridza isainzi yese. Basa rakakosha mukuvandudzwa kwetekinoroji nyowani pane bhizinesi rinotambwa nekuramba uchitarisisa mamiriro evhu rekubereka, ayo acidity - kunyanya kana uchidyara mbatatisi nekabichi.
Gore rega rega, kunoitwa mashandiro eAgrofirm kuvandudza zvakanyanya ivhu, nekuda kwezvinangwa izvi munguva yechando inosvika mazana mashanu ematani (!) Epeat pahekita imwe inounzwa.
Nekuda kwezvinhu izvi zvitsva, kunyangwe mumakore akaoma, purazi iri rinogashira anopfuura zviuru zana nemakumi mashanu ematani ezvakabuditsa. Mumakore matatu apfuura, goho rakakura rembatatisi rakagara richipfuura zviuru zana zvematani! Zvakakosha kuti Agrofirma inoshandisa mbeu dze "Elite" pakudyara mbatatisi dzinotengeka. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kuwedzera zvine hungwaru kugona kwekugadzira, kugadzirisa mamiriro ekushanda evashandi, uye kune mazana matanhatu negumi nesere (!) Yavo nhasi uye vanopa mhando yevatengi.
Iyo sarudzo yakasarudzwa, kushanda nesimba kwechikwata, chiitiko chekudyara chinoshingaira chakaunza iyo yekurima femu "KRiMM" kune yepasirese yekugadzirwa kwezvirimwa uye yakave nechokwadi chekugutsikana kwezviri kukura zvinodiwa nevatengi. Nhasi, zvigadzirwa zvekambani zvinopihwa kumatunhu mazhinji eRussia: kubva kuKaliningrad kuenda kuVladivostok, pamwe neCIS nyika neSerbia.
Tags: Agrofirm KRiMMkugadzirwa kwembeu uye tafura matapiri